Banyere Anyị - Jiangxi Lotte Garments Co., Ltd.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe kpụrụ a siri ike mmepụta usoro na a siri ike àgwà akara usoro. Nke nta nke nta dọtara uche nke uwe ndị a ma ama, dị ka CLOUD-NINE, DISNEY, JBS WEAR, MAGH FOR AKWEKWỌ AKWEKWỌ, H&M na wdg Ka ọ dị ugbu a, LOTTE wulitere mmekọrịta dị ogologo oge ma kwụsie ike na ọtụtụ ndị na-eri anụ na ndị ọrụ. Typedị ụdị akwa maka ụmụ nwoke na-ekpuchi ọsụsọ, sweatshirts, T-shirts, Polo, uwe ogologo ọkpa, Uwe ụra, Pajamas, ngwa ngwa, wdg.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, maka nhazi akara mba ụwa, LOTTE Garment gbasiri ike ma debe usoro mmebe. na ire ahia na ahia., Ma hiwe udiri ahia abuo di ka JONN CABOT na JEAN CABOT. Nke a abụghị naanị iji melite ikike na ọkwa ọrụ nke nhazi, kamakwa ịkwalite R & D na ikike ire ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N'afọ ndị na-abịanụ, dabere na ụkpụrụ nke njikwa eziokwu, ogo nke mbụ, na-akwụ ụgwọ, LOTTE Garment ga-abụ ụzọ iji bụrụ ụlọ ọrụ ọrụ klaasị ụwa.
Dabere na ahụmịhe afọ 23 na njikwa ụlọ ọrụ na nhazi akwa, anyị nwere ike ijikwa ụdị ejiji nwoke ọ bụla. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ngalaba nke aka anyị, anyị nwere ike ịhazi uwe dịka arịrịọ onye ahịa ma ọ bụ nyere onye ahịa aka imezi ngwaahịa a. Anyị ga-enye gị ihe kachasị mma!